Baaq ay soo saartay jaaliyadda Puntland ee Switzerland oo ku saabsan ciidanka dawlada federaalka ah ee ku tabaalaysan Muqdisho. – Radio Daljir
Baaq ay soo saartay jaaliyadda Puntland ee Switzerland oo ku saabsan ciidanka dawlada federaalka ah ee ku tabaalaysan Muqdisho.
Diseembar 6, 2010 12:00 b 0
Geneva, Dec 05 – Baaq ay soo saartay jaaliyadda Puntland ee Switzerland oo ku saabsan ciidanka dawlada federaalka ah ee ku tabaalaysan Muqdisho.
Ku: Ra?iisul wasaaraha Dowladda KMG ? Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo
Og: Madaxweynaha & Madaxda Dowladda Puntland
Og: Madaxda kale ee Dowladda Federalka KMG Soomaliyeed
Og: Isimada waxgaradka iyo dhammaan bulshada Puntland
Og: Ciddii kaloo ay khusayn karto
Tixraac: Qaylodhaankii Gaashaanle Sare Mataan
Ujeeddo: Degdeg wax uga qabashada Xaaladda ciidamada dowladda Federaalka ee reer Puntland ee Xamar ku sugan
Waxaa na argagax iyo walaac geliyay dhawaaqa ka soo yeeray sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda Federaalka Somaaliyeed oo isugu jira qaylodhaan iyo cabasho xad-dhaaf ah oo lagula kacay. Taliyaha ciidanka oo ku hadlaya magaca ciidan ka kooban 1250 askari iyo xaasaskooda oo ku sugan Xamar,wuxu sheegay in noloshoodu halis ku sugantahay.
Waxaa hadalladiisii uu warbaahinta (tus. Radio Daljir) ka sheegay ka mid ahaa:
– ??Waxaa nala kula kacay waxa kasta oo dhibaato iyo bahdil ah. Waxaa nalaga oomiyay wax kasta oo uu bini aadamku u baahan yahay sida : cunno, biyo, hoy iyo xagga caafimaadka. Waxa nalaga qaaday hubki aan dalka iyo dowladda ku difaaci jirnay. Waxaa na loo soo tababaray in aan dalka, dowladda, calanka iyo nafteenna ku difaacno. Muddo dheer ayaan ku sugneyn Xamar, waxaanna u taagneyn habeyn iyo maalin difaaca madaxda iyo hantida dowladda. Waxaa nooga dhintay askar iyo saraakiil badan, waxana ku dhaawacmay tiro badan oo aan haatan heysan wax xanaano ah. Haatan waxaan halis u nahay in nala soo weeraro, waayo ma haysano wax hub ah oo aan isku difaacno haddii nala soo weraro??
– ??Tan iyo intii khilaafku soo kala dhexgalay Madaxweyne Shiikh Shariif iyo Ra?iisulwasaarihii hore mudane Cumar Cabdirashiid, waxa na nala geliyay geeska.Waaxa nalaga goostay mushaarki yaraa iyo wax kasta oo aan xaq u laheyn. Waxaa na loola dhaqmay siyaabo ka baxsan soomaalinimada, muslinnimada iyo bani-aadaninimada??
– ??Waxaa nala saaray cadaadis iyo cagajugleyn xoog leh si aan Xamar uga cararno. Haddii aan damci lahayn inaan halkaas kasoo baxno, waxaanan haysan awood dhaqaale, gaadiid iyo hub aan isku difaacno inta aan jidka ku sii jirro??
– ??Waxaa filanwaa nagu noqday in falkaas xumi nooga imaanayo xafiiska ugu sareeya dowladda oo aan waayahan difaacaynay nafteenana u hurray??
Waxaa nasiib xumo ah in madaxdii laga sugayay in ay isu soo dhoweeyaan bulshada Soomaliyeed ee uu dagaalki sokeeye kala irdheeyay ay haatan danqayaan dhaawacii iyo boogihii hore. Waa nasiib xumo in xafiiska Madaxtooyadu noqdo xarunta lagu kala saarsaaro laguna dulmo bulshada Soomaaliyeed ee 20 kii sano ee burburka iyo baaba?a dhibaatooyin xad dhaaf ah ku soo jirtay.
Haddaba waxa faro iyo suul isdhaafsan ah in Madaxweyne Shiikh Shariif uu mar kasta ururka Midowga Afrika weydiisto ciidamo dheeraad ah, isla markaasna uu dayacayo, kalana dirayo ciidamada Somaaliyeed oo loo tababaray in ay qaranka iyo dowladda difaacaan.
Madaweynuhu ma wuxu ka fadliyeelay ciidamada soomaliyeed oo la jinsiyad ah lana diinta ah, kuwo ajnebi ah oo aan garaneyn danta dalka iyo dadkaba. Waxaa yaab iyo amakaag ah in Soomaliya ay xadkaas quusta ah ku sii socoto oo aan halaaggii la soo maray dersi lagu qaadan. Waxaa muuqda in dowladdu aysan weli u soo jeensan wixi loo xilsaaray ee ahaa dib u dhiska dalka iyo xoojinta midnimada Bulshada.
Qurbajoogga Puntland ee deggan Switzerland waxaa welwel weyn ku haya xaaladda nololeed ee ay ku suganyihiin ciidamada qaarkood dhaawaca yihiin iyo xaasaskooda oo ay ka mid yihiin caruur fara badan. Waxaa ciidamada iyo xaasaskooda lagu qiyaasay ilaa 3200 oo ka kooban askar, dumar iyo caruur.
Waxaan baaqaan u soo tebineynaa dowladda federaalka, tan Puntland, Isimada iyo guud ahaan bulshaweynta Puntland.
– Waxaan madaxda sarsare ee Dowlada Federaalka Somaaliyeed, khaas ahaan Ra?iisulwasaaraha cusub mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ugu baaqeynaa in uu isu xilsaaro arrintaan xasaaasiga ah.
– Waxaan rajeyneynaa in mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu tilaabada wadaninimo ee ku haboon ka qaado daryeelka iyo badbaadinta ciidamadaan qarameed ee uu xilku sida tooska ah uga saaranyahay.
– Waxaan Waxgaradka, siyaasiyiinta iyo isimada Puntland meel kastay joogaanba ugu yeereynaa kana codsanaynaa inay si degdeg ah xil isaga saaraan la socodka iyo wax ka qabadka Qayladhaanka badiba warbaahinta laga wada maqlay.
Magacyada Baaqaan ku saxiixan
– Prof. Mohamed Hared
– Dr. Hassan Ciid Ali
– Mohamed Aden Dalmar
– Hashi Yassin Osman
– Ahmed Yusuf Alibashe
– Mohamed Ali, Abdi ? kalay
– Abdinur Yusuf Hussein
– Abdulghani Ali Ahmed
– Abdiaziz Mohamud
– Mohamed Muse ? Qotome
– Ahmed Jamac Cali
– Ali X. Mohamed Warsame
– Farah Mohamed Farah
Ciidanka bilayska ee magaalada Boosaaso oo hawlgallo af fuliyeen ku qabtay dad lagu tuhmay falal dambiyeedyo.
Maxkamada dambiyada culus & tan darajada 1-aad ee Bossaso oo ay ka socdaan dacwado la xiriira burcad badeednimo, dambi dil ah, iyo eedayn qarax.